कोरोनाभन्दा खतरनाक ‘ब्ल्याक फंगस’ भाइरसको संक्रमित बढ्दो, ६ जनाको मृत्यु « Janata Samachar
काठमाडौं । कोरोना संक्रमणको महामारी खेपिरहेको भारतको विभिन्न राज्यमा अर्को डरलाग्दो भाइरसको संक्रमण पाइएको छ ।
ब्ल्याक फंगस भनिएको उक्त संक्रमणबाट भारतका विभिन्न राज्यका धेरै जिल्ला प्रभावित बनेको समाचारमा जनाइएको छ । अत्यन्त खतरनाक मानिएको ब्ल्याक फंगसबाट पछिल्लो तीन दिनमा लखनाउसहित केही प्रदेशमा गरी ६ जनाको मृत्यु भएको छ । पछिल्लो समय कोभिड अस्पतालमा ब्ल्याक फंगसका संक्रमितको संख्या पनि थपिदै गएका छन् । त्यसरी अस्पताल भर्ना भएकामा केहीको अवस्था गम्भीर रहेका छन् ।
चिकित्सकहरुका अनुसार रोग प्रतिरोधी क्षमता कमजोर भएकाहरुमा यो फंगसको संक्रमण हुने गरेको पाइएको छ ।
लखनाउस्थित झांसी महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कलेजका चिकित्सक डा जितेन्द्रकुमार यादवले बताए–ब्ल्याक फंगसका संक्रमित विरामीहरुको शारीरिक अवस्था अत्यन्त कमजोर रहेको पाइएको छ । उनीहरुको प्रतिरोधी क्षमता पनि कमजोर हुने गरेका छन् । प्रतिरोधी क्षमता कमजोर भएका कारण इन्फेक्सन बढेर संक्रमितको मृत्यु हुने गरेको उनले बताए ।
ब्ल्याक फंगसबाट कोरोनाका संक्रमितहरुलाई बढी खतरा रहेको चिकित्सकहरु बताउछन् । यस्तै आइसीयुमा उपचार गराइरहेका,मधुमेहका विरामी,क्यान्सरका रोगी र मृगौला प्रत्यारोपण गरिएका व्यक्तिमा ब्ल्याक फंगस हुने सम्भावना बढी रहेका छन् ।
यी हुन् ब्ल्याक फंगसका ६ लक्षण
१. ज्वरो आउने, ताउको दुख्ने,खोकी लाग्ने र सास फुल्ने
२. नाक बन्द हुने वा नाकबाट रगत बग्ने
३. आँखा दुख्ने,सुन्निने वा दृष्टि कमजोर हुँदै जाने
४. अनुहारको कुनै भागमा दुख्ने र सुन्निने
५.दाँत दुख्ने, हल्लिने वा चपाउन मुस्किल हुने
६. बान्ता गर्दा अथवा खोक्दा रगत देखिने ।